Day: July 8, 2019 - Kichuu
OBS: Marii Paanalii siyaas-Diinagdee biyyaa irratti xiyyeeffate Kutaa 1ffaa OBS: Marii Paanalii siyaas-Diinagdee biyyaa irratti xiyyeeffate Kutaa 2ffaa Ethiopian Opposition See Dangers if 2020 Vote delayed. REUTERS “If the government is going to postpone [Read More]
– “Badhaasi kun kan uummata Oromooti” Dr.Kabajaa Alii Shabboo – “Dabareen dhiyeessii humna ibsaa har’arraa eegalee ni hafa” Ibsa Ministeera Bishaan, Jallisii fi Anniisaa – Dr. Kabajaa Alii Birraa sirba dhaabanii? – Ajjeechaa N. Beenishaangul [Read More]
Sabboonummaa: Alaabaa Oromoo ol qabaa diina garaa gubaa… 1991 “Namichi kun ijoollee #Amboo mana hidhaatti guursisaa jira. Gocha Tplf waliin hojjechaa ture; ammas itti fufee jira” Oda Labsi Fajji Kan ajjeeses, kan du’es Wayyaanee dha. Wayyaaneen wal [Read More]
Kol. Abiyi Ahimad_FARDA TROOY_Habashootni Ittiin QBO Laamshessuuf Ergatanimoo; Dhuguma Fira QBO’ti? Godina Shawaaa Bahaa irraa Oromoota miseensota ykn deggertoota ABO ti jedhamanii qabamuun hidhaa jiran. 1. Abbaa Gadaa Miidhagsoo Gurmuu, Mojoo irraa 2. Iftiyoom Hirkisaa, [Read More]
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከማናችንም በላይ በህዝብ ተቀባይነት አለው ህዝቡም ይወደዋል ህዝብ የሚወደው ድርጅት ደግሞ ፈጽሞ ሊጠፋ አይችልም QEERROO keechanii kunin hahahahah maalo gaabii Fii naxalaa lafa hin keechistaniiyii, yaa ababuu too hahaha Waan dalagaa keeti [Read More]